7 Xaaladaha isticmaalka aan la filayn waayo Tassna Virtual - Rule News
7 Xaaladaha isticmaalka aan la filayn waayo Tassna Virtual
Waxaan dhamaanteen ognahay waxa aanu dooneyno ka VR: wanaagsan kulan Qabille oo meel. Waxaa laga yaabaa in movies waxaan eegi kartaa in, aad. Laakiin ma warshadaha waxaa qaabeeya keliya by our laga filayo. Waa ay ka buuxaan injineerada iyo abuuray, kaasoo qaadato VR meelo aan aan lahaa la rogmato. Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah VR isticmaalaa in aynaan ku fili karo.
VirZoom: Samaynta Jimicsiga Fun
Jimicsiga maaha xiiso leh; waxa aad ka tagto raaxada sariirta inay sameeyaan caajiso, hawlaha soo noqnoqda dhaxanta, xaqiiqada cirro ilaa aad urin. VirZoom diirada qayb ka caajiso. barebones Tani, bushkuleeti jir-dhis buusmeynin jaanqaadi ku ookiyaale VR brand weyn iyo jirsado jimicsi galay ciyaar. Waxaad ma ahan oo keliya bulshkuleetiga - waxaad tahay samaynta Daqsi gisi, ururinta siddo ama wax alla wixii. Halkan ka mid ah muxibada in deg dega ah, oo halkan VR qaar ka mid ah in ka badan jirka ka badan wax kasta oo kale ee suuqa.
Ma sugi karaa in la sameeyo VR crunches xiiso leh. Waxaa laga yaabaa in ay ii soo jeedin doonaa galay CATAPULT a!
MindMaze: Qiyaanadii Stroke Bukaanka lagu Bogsiiyey
MindMaze samaynayo rigs VR in caawiyo dadka soo maray stroke hanto addimada ay. saynisyahano Medical horay u samaysay cilmi, oo sii kordhaya xawaaraha addinka tabardaran ee VR dhigaysa bukaanka stroke u isticmaali dheeraad ah nolosha dhabta ah. MindMaze sidoo kale qeexay habka ciyaar, si ay u egtahay in ka yar sida caajiso therapy oo dheeraad ah sida videogame xiiso leh. Taasi waa sida ayeeyo garaaca iyada score sare u gaar ah si aad ugu bogsiisid.
3D True: Baadh gudaha The Of Your Bukaanka
Laakiin qiyaanadii bukaanka galay caafimaadka ma aha isticmaalka kaliya caafimaad ee VR. EchoPixel isticmaalayo ay technology imaging VR 3D si ay u caawiyaan dhakhaatiirta arki gudaha bukaanka ay. software The kuu ogolaanayaa dhakhaatiirta arki baaritaano bukaanada 3D iyo sidoo kale iyaga oo isku dubaridi siyaabo qaarkood si fiican loogu diyaariyo qalliin.
Hirarka Grace: Faham Iyada Movies
Hirarka Grace waa shot movie lix daqiiqo ee Liberia Dadka u Sahlaya Inay dareemaan murugo iyo dhaawacyada dadka ku nool dalka faafa-ku dhuftay Ebola. kara Tani jiidatay hay'adaha kala duwan sida UN iyo ku xigeenka, oo waxay ka caawisaa si ay u koraan damqasho loogu talo galay dadka ku nool yihiin xaalado aan (hore) xitaa ma qiyaasi kari waayay. Waxaa sidoo kale isku xidhka galay saxaafadda immersive, taas oo ka dhigaysa in muuqaalada ha aad ugu yaraan qaadi bidhaamaysa waxa ay ka dhigan tahay in ay noqon bilaa guri ee Maraykanka.
Samsung iyo Lix Calanka: Real Siriyalka Virtual
Ka hor inta VR, waxaan lahaa waayo-aragnimada tiyaatarka immersive, taas oo loo isticmaalo hydraulics inay xukumid qol gaar ah loogu talagalay inta aad daawaday filim Blazers CGI a. Waa wax la soo dhaafay hadda, maxaa yeelay, waxaad hadda la qaadi karo kortaan VR ah halka fuushan ah Siriyalka dhabta ah. Rafaa park Entertainment Lix Calanka la Samsung wada in ay keenaan u iibgeysa VR in coasters rullaluistemadka ay. Qaar ka mid ah waayo-aragnimada VR bedelay Siriyalka la dagaalo spaceship cirka shisheeye, halka qaar kalena ay keeneen in ka badan oo ah Super-Man-aragnimo.
Dhab ahaantii, tani waxay u muuqataa sida hab si ay u sameeyaan coasters rullaluistemadka cabsi yar!
Xaqiiqda Virtual? In aan maxkamadda? Waa dheeraad ah oo la aamini karo ka badan waxaad u malaynaysaa! Muuqaallo Dembiga waxaa horay leydin in lagu daydo 3D, kuwaas oo markaas squished in 2D tahay marka ay ku daabacan tahay warqad. VR madadaalada goobta dadka ugu waayo-aragnimo maxkamadda ha lahaa halkii uun keliya arki goobta dambiga. University of Zurich ayaa durbaba goobta leydin ah toogashada ah oo uu maray baaris xeel dheer booliska, sidaas garsoorayaasha iyo xeerbeegtidu ka filan karaa in ay qaataan celin galay VR.
Cir Samaynta guriga dareemaan
safarka Space waxa uu noqon doonaa qaali dalxiisayaasha maalin kasta wakhti dheer qaar ka mid ah. Nasiib wanaag, waxaa jira qorshe tours VR of space. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa sii jiri doonaa dadka halkaas socday, iyo dariska ah khatarta ku jira xoogaa loo fiiryo nabaad-jirka. NASA ayaa taabtay Dali of Dartmouth si ay u horumariyaan software VR in dayn inay cir qaadan jeex yar oo guriga meel kasta oo ay tagaan. waxaa madadaalada VR ah geeduhu xeebta ama ay guriga oo dhan Noqo, waxa uu noqon lahaa wax ka caawin doono kuwa u safraya Mars inoo.
Eeg? mustaqbalka VR waa labada xiiso leh oo la yaab leh. Oo qaybta ugu fiican waa caqabad hadda ee laga galo waa quruxsan hooseeyo. Waxaad barnaamijka karaan walax on matoorada user-saaxiibtinimo sida Midnimada iyo Engine dhalanteed 4. Inta badan oo ka mid ah codsiyada cusub VR ma aha in aragga adag, si aad u isticmaali kartaa goobaha model stock sida CGtrader si aad u hesho daydo aad soontaan. Iyada oo qalab ugu dhow dahay, waxa kaliya ee aad u baahan tahay fikrad. Sidee ku saabsan dheeraadka VR ah crunches in igu beddelin CATAPULT a?
Google Oo Iibsaday shatiyada imaging dalwaddii ka Foxconn
7 Mucjiso Dabiiciga ah ee Adduunka
18117	4 xaqiiqada Virtual
← Maskaxda ee dadka ka walaacinaya yaabaa Miyaydnaan duwan Adduunka Android N: Google MUUJIYAY Future ee OS ee →